eSancharpati | » बसपार्कको टिकट बाँड्ने हैसियत पनि छैन माधव नेपालको- प्रधानमन्त्री ओली बसपार्कको टिकट बाँड्ने हैसियत पनि छैन माधव नेपालको- प्रधानमन्त्री ओली – eSancharpati
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेता माधव नेपाल लाई आत्मालोचना गरेर पार्टीमा फर्किन आग्रह गरेका छन । नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजको राष्ट्रिय भेलालाई सोमबार काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेता नेपाल लाई आत्मालोचना गरेर पार्टीमा फर्किन आग्रह गरेका हुन ।
प्रधानमन्त्री ओलिले भने ‘अहिले पनि पार्टीबाट निष्कासन गरेका छैनौं । आत्मालोचना गरेर फर्किनुस्, पार्टीमा विना भेदभाव काम गर्न दिन्छौं ।’उनले अघि भने, ‘माधव नेपालजी आएर काम गर्नुहुन्छ भने अहिलेसम्म गरेका अपराधपूर्ण कामको आत्मालोचना गर्नुस् ।’नेपाललाई पार्टीको सदस्यबाट निश्कासन नगरी निलम्वन मात्र गरिएको बताए ।
उनले भने, ‘पार्टीलाई ध्वस्त पार्न खोज्नुभयो भने। बघिनी तबसम्म चुप हुन्छ जबसम्म डमरुमाथि खतरा हुँदैन। पार्टीमाथि धावा बोल्नुभयो भने ठिक लगाइने छ। बोलिरहनुभएको छ तर म सीमा हेरिहेको छु। तपाईंहरूलाई मात्रै निष्कासन गर्न होइन हामीलाई पनि निष्कासन गर्न आउँछ भन्ने सम्झना राख्नुहोस्।’
उनले नेपाल समूहले आफूलाई गरेको कारबाही ‘किर्नाले भैंसी खाए‘ जस्तो भएको भनी व्यंग्य गरे ।
उनले भने, ‘प्यादाले मन्त्री खान्छ चेसमा। भुसुनाले लामखुट्टेले हात्ती खान्छ। उपियाँले मान्छे खान्छ। कति खान्छ ? तिनीहरूले कम्युनिष्ट आन्दोलन खान्छु भनेको त्यही हो। उपियाँले मान्छे खाएजस्तो। किर्नाले भैंसी खाँदैन। किर्नाले भैंसी खाएको देख्नुभएको छ कि छैन? यिनीहरूले गरेको हामीलाई कारबाही त्यस्तै हो। किर्नाले भैंसी खाएजस्तै। किर्नाले भैंसी खाने ? मनको यिनको रहर हो।